Freshsales: Dọrọ, Tinye, Mechie, na Nzụlite Na-eduga Maka Azụmaahịa Gị Na Otu Platform | Martech Zone
Freshsales: Dọrọ, Tinye, Mechie, Na Nzụlite Na-eduga Maka Azụmaahịa Gị Na Otu Platform
Tọzdee, Ọktoba 8, 2020 Tọzdee, Ọktoba 8, 2020 Douglas Karr
Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke CRM na nyiwe nkwado nkwado na ụlọ ọrụ ahụ chọrọ njikọta, mmekọrịta, na njikwa. Enwere ọnụọgụ dị elu na ntinye nke ngwaọrụ ndị a n'ihi na ọ na-akpaghasị nzukọ gị, ọtụtụ oge chọrọ ndị ndụmọdụ na ndị mmepe iji nweta ọrụ niile. Ghara ikwu banyere oge ọzọ achọrọ na ntinye data yana obere ma ọ bụ enweghị ọgụgụ isi ma ọ bụ nghọta banyere njem nke atụmanya gị na ndị ahịa gị.
Freshsales bụ CRM na-ere ahịa maka ndị otu na-achọghị ịmegharị n'etiti ọtụtụ ngwaọrụ. Freshsales na-anapụta azịza ahịa 360 ogo n'otu ikpo okwu, yabụ ị nwere ike:
Dọrọ mmasị ikike na-eduga azụmahịa gị
-arụ site na otutu aka
nso emekọ ngwa ngwa
Na-azụlite mmekọrịta bara uru.
Akụkụ nke Freshsales Gụnyere
Ndi ana-akpo - nlele ogo nke onye ahịa gị na profaịlụ mmekọrịta mmadụ na ibe ọ bụla na otu ihuenyo nwere ọgaranya profaịlụ akpaaka.
Isi ọgụgụ isi nyocha - iji aka dozie ihe mbu gi ma tinye Freshsales 'ọgụgụ isi na ọgụgụ isi dabere na ọrụ na profaịlụ ha.
Njikwa Mpaghara - mepụta ókèala yiri ụdị ahịa ahịa nzukọ gị. Na-ekenye ndị ahịa azụmaahịa ziri ezi na akpaghị aka.
Oge akara aka, Ihe aga-eme, faịlị, na ndetu - - hazie oge, edetu ọsọsọ, kekọrịta faịlụ ma jikọta ya otu na ihe aga-eme.
Anya Pipeline Ahịa - nyochaa ọganihu na-emeghe azụmahịa na otu echiche na a visual ahịa pipeline na ị nwere ike iyo na ụdị. Mepụta otutu pipeline (inbound, outbound, e-commerce, wdg). The interface-enyere gị aka jikọọ na atụmanya kpọmkwem site dashboard.
Weebụsaịtị & App Tracking - soro ọdịnihu gị ma mara otu ha si eji weebụsaịtị gị ma ọ bụ ngwaahịa dijitalụ emekọrịta. Kwadebe mkparịta ụka dị mma, dị mkpa, ma jiri ya hazie akara ndị na-eduga na cherry-bulie ndị na-ekpo ọkụ.
Usoro iheomume - nweta usoro iheomume nke oru olile anya nke obula, yabụ otu ndi ahia gi nwere ike ichota oge kwesiri.
Smartform na-eduga - were web gị na-eduga n'ime CRM gị. Nweta ọnọdụ ka mma nke ndu ka Freshsales auto-populates nleta weebụsaịtị, profaịlụ mgbasa ozi mmekọrịta, na ndị ọzọ.
Pịa Kpọọ - enweghị ụgwọ ọrụ ngwanrọ / ngwaike. Dị nnọọ ebe oku na otu click si n'ime Freshsales iji ekwentị emebere - jiri oku niile na-abata ma na-apụ apụ na-akpaghị aka. Hazie olu gị niile ma nabata ozi gị.
Gam akporo na iOS Mobile App - nweta a 360 Celsius echiche nke gị ahịa na ọ laa na Freshsales gam akporo na iOS ngwa.
Ọpụpụ Ọrụ Ọrụ Kpesa - chọpụta otu esi apụ oku na-aga site na ndị ahịa ọ bụla gafere oge ụfọdụ.
Zipu ma soro E-mail - zipu ma ọ bụ nata ozi ịntanetị site na ma Freshsales ma ọ bụ onye ahịa email gị, ma chọta email ahụ na nchekwa ezigara ma ọ bụ Igbe mbata nke ngwa abụọ ahụ. Zipu nnukwu ozi ịntanetị site na iji ndebiri ahaziri ma soro arụmọrụ ha na nsuso mgbasa ozi. Nweta amamọkwa ozugbo na email meghee ma pịa, ma hazie ihe ị ga-eme ọzọ. Mejuputa DKIM maka ozi email etinyere na digitally maka imelite nke oma.
Arụ Ọrụ na Mgbasa Ozi - Mee ka ọrụ a na-emegharị ugboro ugboro, mezie usoro, ma rụpụta ọrụ na ọgụgụ isi. Mee ma soro usoro mgbasa ozi email na-achịkwa iwu iji zipu ozi ịntanetị ahaziri iche na atụmanya gị. Na-akpalite omume akpaghị aka dabere na omume ha.
Nkwupụta Ahịa na castkọ amụma - jiri mkpesa dị iche iche ma ọ bụ mepụta akụkọ ọdịnala iji wepụ data ọ bụla na CRM. I nwekwara ike ịtọọ oge na mbupu akụkọ ma kesaa ha ngwa ngwa n'etiti ndị otu gị. Na ire ere na ọsọ akụkọ, ị nwere ike ịchọpụta oge ole otu gị na-ewe iji mechie ohere. Chọpụta nkebi ebe ndị nnọchiteanya gị na-etinyekarị oge ha n’ahịa ahịa.
Dashboards - lelee otutu mkpesa n’otu ihuenyo ya na dashboard ederede di nkenke. Soro ọnọdụ nke ahịa gị n'oge ọ bụla site na usoro oge na nhọrọ mbupụ.
Mbugharị na Njikọ ọnụ - Ntinye aka na ngwa ngwa ịpị data sitere na Salesforce, Zoho CRM, Insightly, Pipedrive, Salesforce IQ, ma ọ bụ naanị CSV. Na-etinye ọnụ na Freshchat, Onyinye, G Suite, Akụkụ, Outlook, Zapier, Exchange, Hubspot, Mailchimp, Office, na ihe ndi ozo meputara!
Multilanguage - Ejiri asụsụ 10 mee ihe ugbu a iji kwado ndị ahịa ụwa.
Dabara - Ejiri ya na United States na ISO 27001, SSAE16, na HIPAA na-akwado usoro data. Omume nzuzo Freshworks bụ TRUSTe kwadoro na nkwado GDPR.
Debanye aha maka Akaụntụ Freshsales efu
Ngosipụta: Abụ m a Freshsales Mgbakwunye.
Tags: 360 ogoaiAmamịghe echichennukwu emailCRMMbugharị crmemail MarketingFreshsalesHIPAAndu akaraọtụtụ asụsụnjikwa mkpọsa ahịaire ereNkwado ire ahịaịkọ ahịa ahịapipeline ahịaahịa akụkọọsọ ahịaArụ ọrụ arụ ọrụ ahịaNJ16
Oribi: Nchịkọta Azụmaahịa Enweghị Usoro na Azịza Need Kwesịrị Growzụlite Azụmaahịa Gị